मंगलबारदेखि दशैँको टिकट बुकिङ, कहाँ जान कति भाडा लाग्नेछ? | NiD - News
मंगलबारदेखि दशैँको टिकट बुकिङ, कहाँ जान कति भाडा लाग्नेछ?
नागरिक दैनिक, २५ भाद्र २०७४
नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैँका लागि यातायात व्यवसायीहरुले मंगलबारदेखि बसको टिकट बुकिङ गर्दैछन्। सरकारको दवाबमा व्यवसायीहरु अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न सहमत भएका हुन्। सहमतिअनुसार बसका छतमा यात्रु राख्न पाइने छैन। यात्रुका सामान मात्र राख्न पाइनेछ। छतमा यात्रु राखेको पाइएमा बसको इजाजतसम्म खारेज हुनसक्नेछ। व्यवसायीले भाडदर वृद्धि गर्न दवाब दिए पनि यो पटक पुरानै भाडादरमा यात्रु दशैँमा घर जान पाउनेछन्।
यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएभन्दा बढी भाडा नतिर्न यात्रुलाई आग्रह गर्दै कसैले बढी भाडा मागेमा प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह गरेको छ।
काठमाडौंबाट कहाँ जान कति छ भाडादर? सूचि हेर्नुहोस्